Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpanohitra : Manao izay tsy hitiavan’ny vahoaka azy
Ny firenena tsy misy mpanohitra matanjaka dia tsy hivoatra sy tsy handroso na oviana na oviana. Ilaina ny mpanohitra amin’ny firenena iray mba tsy hisian’ny atao hoe fanararaotam-pahefana izay ataon’ny antoko sy ny filoha mahazo ny fitondrana amin’ny alalan’ny fifidianana. Ilaina dia ilaina tokoa ny mpanohitra mba hisian’ny antsoina hoe fifandanjam-pahefana ary tena ilaina tokoa izy ireo mba hisian’ny tena demôkrasia marina.
Ilaina dia tena ilaina ny tsikera ataon’ny mpanohitra amin’ny fitondrana mba tsy hivaona amin’ny fenitra ny fitondrana mangarahara sy ny fanjakana tan-dalàna ny mpitondra ka tsy hanao fanjakana tsy refesi-mandidy.
Eto Madagasikara dia ny vina nentin’ingahy Andry Nirina Rajoelina hitondrana ny firenena ao anatin’ny dimy taona izay nanomboka ny faha 19 janoary 2019 ka hatramin’ny 19 janoary 2023, dia izany IEM (Initiative pour l’émergence de Madagascar) no sori-dàlana harahina sy nifanekena.
Tonga tampoka ity ny valanaretina « coronavirus » na ny « covid-19 » izay nandripaka olona maro eran’izao tontolo izao satria dia efa hatrany amin’ny « 18 485 702 » no olona voan’ity aretina ity nanomboka ny taona 2020 ity. Tao anatin’ny fito volana izao dia mahatratra hatrany amin’ny 700 592 no isan’ny olona maty. Hoan’i Madagasikara manokana dia nahatratra 11 895 no olona voa, ny salama dia miisa 9286, ny mbola tsaboina dia 2486, ary ny maty dia 123.
Raha ireo tarehi-marika ireo no asian-teny dia isan’ny firenena azo lazaina fa afaka miady amin’ny covid-19 na ny coronavirus i Madagasikara. Samy matahotra ny ho faty daholo ny olona rehetra noho izany ka ny ankoatran’izay dia ambinambin-javatra ankehitriny. Tsy mifidy tokoa ity aretina ity na manampahaizana na tsy mianatra, na mpanakarena na mahantra , na ankizy na olon-dehibe na antitra na tanora, ary na jentilisa na mpino kristianina ary na inona na inona no fianoanao.
Aoka hazava ny resaka fa ady amin’ity aretina covid-19 ity izao no tena vaindohan-draharaha ny vahoaka tsy ankanavaka ary indrindra ny fitondrana fanjakana.
Koa mahakasika izay ady ataon’ny fitondram-panjakana izay indrindra no mahabe resaka amin’izao fotoana izao.
Aoka ho tsorina ny resaka fa misy ny mety ary hita ny ezaka ataon’ny fanjakana, saingy hita kosa fa maro no olona tsy afapo. Ny zavamisy dia hita fa tena manao izay azony atao ny fanjakana ankehitriny saingy maro amin’ireo olona ao anatin’ny fitondram-panjakana no tsy mahasahana ny asa tokony hataony. Isan’izany ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta. Hita koa izany amin’ireo olom-boafidy isan- tsokajiny izay mpomba ny fanjakana dia ny TGV sy ny Mapar ary ny IRD. Tsy vitsy koa ireo filoham-pokontany sy ireo ben’ny tanàna izay mifampikasoka mivantana amin’ny vahoaka any ifotony no tsy mahasahana ny asa tokony hataony. Misy mihitsy aza no mihevitra ny hangalatra sy hanodinkodina ny fanampiana izay entin’ny fitondram-panjakana sy ny vondrona iraisam-pirenena izay mamatsy ny vola amin’izany.
Izany no olana misy ankehitriny ka hararaotin’ny mpanohitra izany. Tsy ny hanatsarana azy fa ny hanonganam-panjakana no tanjon’izy ireo. Dia lazaina avokoa izao hevidravina isan-karazany izao. Takiana ny mangarahara hono amin’ny vola be izay nomen’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ireo. Dia mitaky ny fiarahana mitantana toa tamin’ny andron’ny tetezamita koa izy ireo. Tsara ilazana izany saingy tsy fotoanan izao. Irahana mahita ny ezaka ataon’ny fanjakana amin’ny fanampiana ny vahoaka isan-tokatrano fa indrindra ireo fianakaviana marefo. Mbola tsy nisy toa izao aloha rah any zavanitranga teto Madagasikara.
Tsy mitady korontana, tsy mila adilahy politika ny vahoaka ankehitriny fa ny fahasalamana no ady varotrany tsy ho azon’ny aretina covid-19 ity, ny fitsaboana ho azon’ny olona rehetra, ny fahazoana fanampiana sakafo hohanina, ny filaminana, ny fikarakarana ny sosialim-bahoaka, ary ny firaisankinam-pirenena hiady amin’ity aretina ity amin’ny fomba haingana.
Tsapan’ny vahoaka ny ezaka ataon’ny fanjakana na dia tsy lavorary aza izany. Hita koa ny ezaka ataon’ny vahoaka amin’ny fanarahana fepetra na dia tsy tena 100% ny fanarahana izany.
Tsy izany kosa nefa no ataon’ny mpanohitra ankehitriny fa manakorontana saim-bahoaka. Manao izay tsy hanarahan’ny vahoaka ny toromarika isan-karazany takiana amin’ny fihibohana. Misy mihitsy aza izy ireo no mivavaka sy mikendry ny hahabetsaka ny olona maty sy ny hiparitahan’ny aretina amin’ny vahoaka mba hahzoana hanongam-panjakana indray. Isan’izany io fanoherana tarihin’ingahy Ravalomanana Marc sy ny Hery Rajaonarimampianina ao amin’ny rodoben’ny mpanohitra amin’izao fotoana izao io.
Eo anatrehan’izany dia hita fa mirefarefa tanteraka ny toe-tsain’ny mpano politika mpanohitra Malagasy amin’izao fotoana izao. Manao izay tsy hitiavan’ny vahoaka azy izy ireo.
Aoka isika tsy hihevitra ny Malagasy ho bado sy dondrona na adala fa na tsy miteny aza izy ireo dia mahalala ny tokony hataony.